Jijiga:Madaxwaynaha Degaanka Somalida Atobiya oo ku Wajahan Wadamada Yurub – Rasaasa News
Jan 13, 2014 atoobiya, ay, ayaa la, badan, cabdi, Cumar, dadka, dalalka, dawlada, degaanka, filayaa in, ku, Madaxwaynaha, Maxamuud, mid, oo, qaar ka, safar, somalida, tago, uu, waas, yihiin, Yurub
Jijiga, Jan 13, 2014 – Madaxwaynaha dawlada degaanka Somalida Atoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa la filayaa in uu safar ku tago qaar ka mid dalalka Yurub, kuwaas oo ay ku badan yihiin dadka Somalida.
Wararkan oo aan ka soo xiganay dad ka mid ah jaaliyada degaanka oo la shaqeeya safaaraha ayaa rasaasa u xaqiijiyay imaanshaha madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar. Xogtan oo aan isku daynay in aan ka dhex xaqiijino Jijiga, ayey masuuliyiinta aan la xidhiidhnay noo sheegeen in ayna la soconin. Xogta aan helay ma sheegin cida ku wehelin doonta madaxwaynaha safarkiisa.
Madaxwaynaha Degaanka Somalida Atoobiya Cabdi, waa madaxwaynihii ugu horeeyey ee degaanka oo ku dhiiraday booqashada dalalka reer galbeedka, sanadkii 2010. Xiligaas oo uu jabay xayndaabkii ONLF, ka dib kolkii ay qayb ka mid ah ururka ONLF heshiis la gashay Atoobiya. Wixii xiligaa ka dambeeyey socdaaladiisu waxay ahaayeen joogto.
Ujdeeda safarka madaxwaynaha Cabdi, ayaa lagu sheegay qorshe saddex waji leh; dhaqaale, hubinta mucaaradad hor leh oo la sheegay iyo waliba ka hor dhaca dacwado la sheegay in ay kaga fool leeyihiin Yurub.
Qorshaha dhaqaalaha oo saldhig u ah safarka madaxwaynaha, ayaa la sheegay in safiirka Atoobiya u fadhiya Ingriiska uu fariin niyada ah ka helay shacabka Somalida xuskii Hidhaar. Xafladii ka dhacday Safaarada oo loogu talo galay in ay ka qayb galaan 300 oo ruux waxaa tagay 1200 qof.
Dhaxaana loola dhaqmay si ka gadisan xafladaha ay dhigaan dadka Somalida ah. Safaaradu waxay ka qaaday qofkii yimaada xaflada £20, lacagtaas oo isugaynteedu noqotay £24,000 (US$39600).
Safaaradaha Atoobiya ay ku leedahay dalalka Yurub, Waqooyiga Maraykanka iyo Ustaraaliya ayaa isku qorshe ku hawlgalay waxayna qabteen lacag ayna filayn oo gaadhaysa hal milyan (US$1 million). Lacagtaas oo 90% laga helay dadka Somalida ah ee ku nool dalalkaas.
Booqashada madaxwaynaha ayaa arintaas salka ku haysa, waxaana uu shirar yabooh ah ku qaban doonaa safaaraha Atoobiya ay ku leedahay dalalka Yurub. Somalida ku nool dacalada aduunka ayaa si xoog leh hore uga qayb qaadatay dhismaha biyo xidheenka Atoobiya iyaga oo bixiyey lacag dhanl 45 millyan ah.
Qorshaha kale ee la xidhiidha safarka madaxwaynaha ayaa ah hubinta heerka uu gaadhsiisan yahay mucaarad balaadhan oo lid ku ah Atoobiya oo ay u dhantahay Somalidu, ka dib kolkii AMISOM ogolaatay in ciidamada Atoobiya qayb ka noqdaan ciidamada AMISOM.
Arinta saddexaad ee safarka madxwaynaha ayaa ah in uu ka faa,iidaysto kasbashada dadka u dhashay degaanka ka hor inta aan lagu dhawaaqin dacwada xasuuq ah oo ka dhacday degaanka Somalida Atoobiya sanadihii 2006/2010, kuwaas oo qayb uu ka haa madaxwaynaha degaanku.
Jijiga: Madxwaynihii Degaanka Axmaarada oo Jujuub Laggaga Qaaday Jagadiisii